आगामी निर्वाचनमा गोकर्ण बिष्टसँग चुनाव लड्ने रामकुमारी झाँक्रीकाे घाेषणा ! - News 88 Post
काठमाडौँ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाक्री र एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले आगामी चुनावमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने भएका छन् । आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट झाँक्री र विष्ट उठ्ने देखिएको छ ।
एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री विष्ट निर्वाचित सो क्षेत्रबाट आफु प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा झाँक्रीले गरिसकेकी छिन् । युवाहरु माझ लोकप्रिया झाक्री र विष्ट बीच प्रतिस्पर्धा रोचक हुने अबको चुनावमा देखिएको हो ।
झाक्रीलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समर्थन गर्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा विष्ट भने एमालेकै मतदाताको भर पर्नुपर्ने छ । सत्तारुढ गठबन्धनका केही नेताहरुले आगामी निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले तालमेलका आधारमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
याे पनि समाचार, देशभरका माओवादी नेताकार्यकर्तालाई सोच्न बाध्य बनाउने जनार्दनको त्यो एक वाक्य !
अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका चर्चित नेता जनार्दन शर्माले माओवादी पार्टी विघटन हुनुको कारणले देशभरका पार्टी नेताकार्यकर्तालाई सिरियस बनाएका छन् ।
आज शनिवार चौंरीदेउराली–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले प्रचण्डपथ छाडेदेखि पार्टीमा विघटन सुरु भएको दाबी गरे ।
मन्त्री शर्माले विचारको केन्द्रीकरणको महत्त्व अहिले आएर बुझेको बताएका छन् । मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले प्रचण्डपथ जुन दिन छोड्यौं, त्यो दिनबाट पार्टीमा विघटन सुरू भयो, गुटबन्दी सुरू भयो । अनेक–अनेक समस्यामा पार्टी गयो । विचारको केन्द्रीकरण, संश्लेषणको कति महत्त्व हुने रहेछ भन्ने कुरा आज आएर हामीले बुझेका छौं ।’
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नामबाट स्थापित प्रचण्डपथमा नाम मात्रै नजोडिएर त्यसमा उत्पीडित वर्गको भावना पनि जोडिएको शर्माले बताए ।‘हामीले जनयुद्धका बेलामा विचार केन्द्रित गरेका थियौं । प्रचण्डपथ निर्माण गरेका थियौं ।
प्रचण्डपथभन्दा प्रचण्डको नाम जोडिएको थियो । त्यो नाम जोडिएको कुरा मात्रै होइन, नेतृत्वमा उहाँ रहेको कारण उहाँको नाम जोडियो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसभित्र हामीले आमउत्पीडित जनताको भावना, पछाडि परेका सबैको भावना जोडेर सामन्तवादविरुद्ध प्रस्टरूपमा प्रहार गरेका थियौं ।’
सभामुख सापकोटा जे’ल’ जाने कांग्रेस नेता बस्नेतको दा’बी
August 28, 2021 August 28, 2021 N88
December 7, 2021 N88
बढ्याे सार्वजनिक यातायातको भाडा, कहाँ कति पुग्यो (सूचीसहित)
July 16, 2021 N88